Jorginho Oo Ka Hadlay Go'ankiisa Joogitaanka Kooxda Chelsea
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Jorginho oo ka hadlay go’ankiisa joogitaanka Kooxda Chelsea
Jorginho oo ka hadlay go’ankiisa joogitaanka Kooxda Chelsea
Jorginho ayaa mar kale ku celiyey inuu aad ugu faraxsan yahay joogitaanka kooxda Chelsea isla markaana uusan dooneynin inuu ka tago Stamford Bridge xagaagan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu ku laabanayo Napoli , halkaasoo uu u saftay 160 kulan ka hor inta uusan ku biirin Blues 2018.
Wakiilka Jorginho ayaa dhawaan soo jeediyay in macmiilkiisu u furan yahay inuu ku biiro kooxda ka ciyaarta Serie A dhamaadka ololahan.
Wakiilka Joao Santos ayaa ka laabtay hadalkaas isbuucii la soo dhaafay, si kastaba ha ahaatee, Jorginho ayaa haatan cadeeyay inuu si buuxda diirada u saaray Chelsea waqtigaan.
“Saaxiib, runta ayaan kuu sheegayaa. Waqtigan xaadirka ah, sideen uga fikirayaa mustaqbalka laba sano kadib, anigoo heysta waxa wali u baahan inaan ciyaaro xilli ciyaareedkan. Kadib Euro ayaa imanaya,” ayuu u sheegay TNT Sports. .
“Marka, si daacad ah, ma jirto wado horay looga fikiro. Runtii, aad ayaan ugu faraxsanahay halkan. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay halkan. Markaa kama fikirayo wax kale sidoo kale. Hadda, xilligan, ma jirto sabab ka fikir waxa dhici doona laba sano gudahood, tusaale ahaan. “
Jorginho ayaa 29 kulan u saftay Chelsea xilli ciyaareedkan.
Previous articleArsenal oo diyaar u ah ineey iska iibiso weeraryahanka faransiiska Lacazetta
Next articleManchester united iyo chelsea oo ku dagaalamayaan Lucas Vasques.